पहिरोका कारण बागलुङको जैमिनिमा ७ घर वगे ४१ घरका स्थानिय विस्थापित –
पहिरोका कारण बागलुङको जैमिनिमा ७ घर वगे ४१ घरका स्थानिय विस्थापित
पहिरोका कारण बागलुङको जैमिनि नगरपालिका वडा नम्वर १ को सिंगो गाउँका बासिन्दा विस्थापित भएका छन् । गत भदौ २८ र २९ गते गएको पहिरोले जैमिनी नगरपालिका १ टुनिवोटका ४१ घर विस्थापित भएका हुन् ।
पहिरोले ७ वटा घर वगाएको छ भने वाकी ४१ घर पहिरोको चपेटामा परेपछि स्थानिय विस्थापित भएको हुन । गाउँमाथिबाट पहिरा खसेकाले विस्थापित भएका स्थानियहरु घर छाडेर सामुदायिक विद्यालय छिमेकी र आफन्तको वस्न वाध्य भएका हुन ।पहिरोले पुरिएर भदौ २८ गते ६२ बर्षीय लक्ष्मी पौडेल २९ गते ६८ बर्षीय हरिकृष्ण पौडेलको घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि टुनिवोटको पुरै गाँउ सोकमा डुवेको छ । पहिरोले घरसँगै आफ्ना आफन्त गुमाएका परिवरले छिमेकीको घर काजकिरिया गरिरहेका छन् । कोरोना कहरसँगै पहिरोले विनाश निम्त्याएपछि सिंगो गाउँ अस्तव्यस्त भएको छ ।
मुस्किलले ज्यान बचाएकाहरूलाई बाससँगै गाँसको समेत चिन्ता थपिएको छ । साझ ५ वजेपछि स्थानिय घर छोडेर अन्यत्रै जाने गरेको रेडक्रस उपशाखा सभापती ऋषिराम पौडेलले वताए । वाईट ऋषिराम पौडेलल सभापती रेडक्रस सोसाईटी जैमिनि उपशाखा पहिरोले ८ घर अहिले बस्न मिल्ने अवस्था छैनन । गाँउमा ठूलो भौतिक क्षति भएकाले तत्कालका लागि पहिरोबाट प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थानियको माग छ ।
अविरल वर्षाले गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले गाउँ नै घेरिन थालेपछि गाँउले घर छाड्न वाध्य भएका हुन । गाँउमा मानविय र ठुलो भौतिक क्षेती भएकोले पहिरोवाट वचेका स्थानियलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने दायित्व सरकारको भएको स्थानिय अगुवा महिलाको भनाई छ ।
भिरालो जमीनमा बनेको बस्ती, माथिबाट आएको पहिरोले गाउँलाई घेरेकाले छ । बागलुङ नगरपालिका वडा नम्वर १२ मा बस्ती माथिबाट गत आर्थिक वर्षमा सडक खनिएको र बस्तीको भूभाग कमजोर भएकाले पहिरो गएको स्थानिय महिलाको भनाइ छ ।कमजोर भुबनाव भएको गाँउ माथि वाट गएको सडकले विना निम्ताएको वडा अध्यक्ष भुपेन्द्र थापाले वताए ।
जिल्लामा यसअघिका वर्षाले विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा १ सय भन्दा वढी घर विस्थापित भइसकेका छन् । बर्खायाम नसकिएकाले अझै विभिन्न स्थानमा पहिरो जाने सम्भावनाका साथ धनजनको क्षति हुन सक्ने भएकाले सतर्क तथा सुरक्षित स्थानमा वस्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ । यस वर्ष जैमिनी नगरपालिका भित्र पहिरोका कारण ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अविरल वर्षाका कारण जैमिनी नगरपालिका वडा न. १ कुश्मीेसेरामा २ जना र वडा न. ५ बिनामारेमा एक जना जेष्ठ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ।नगरपालिकाको प्ररम्भीक तथ्याङ्क अनुसार पहिरोका कारण नगरपालिका भित्र १० घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । ४५ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् ।
« कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला कोरोना मुत्त
किसानको नाममा व्यापक अनियमितता : काम अधुरा, भुक्तानी पूरा »